Otu nwoke onye Kenya aha ya bụ Samuel, * kwuru, sị: “E ji ịgba chaa chaa mara m. Ekpeela m ekpere ọtụtụ ugboro ka m rite ezigbo ego, ma, o nwebeghị mgbe a zara ekpere mụ a.”
Otu nwata nwaanyị onye Filipinz aha ya bụ Teresa, kwuru, sị: “Ihe anyị na-eme n’ụlọ akwụkwọ bụ ịgụgharị ekpere anyị bu n’isi.”
Otu nwaanyị onye Gana aha ya bụ Magdalene, kwuru, sị: “M na-ekpe ekpere ma m nwee nsogbu. M na-arịọ Chineke ka ọ gbaghara m mmehie m nakwa ka o nyere m aka ka m bụrụ ezigbo Onye Kraịst.”
Ihe a ndị a kwuru gosiri na e nwere ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ ji ekpe ekpere nakwa na ụfọdụ na-arịọ ihe dị mma, ndị ọzọ ana-arịọ ihe na-enweghị isi. Ụfọdụ na-esi n’ala ala obi ha ekpe ekpere, ma ndị ọzọ anaghị eji obi ha niile ekpe ekpere. Ọtụtụ nde mmadụ taa na-ekpe ekpere. E nwekwara ọtụtụ ihe ndị ha na-arịọ maka ya. Ụfọdụ n’ime ha bụ ka ha mee nke ọma n’ule, ka òtù egwuregwu ha nwere mmasị na ya merie, nakwa ka Chineke nyere ha aka ilekọta ezinụlọ ha nke ọma. Nchọpụta e mere gosiri na ndị na-anaghị aga chọọchị na-ekpedị ekpere mgbe niile.
Ị̀ na-ekpe ekpere? Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere, gịnị ka ị na-arịọ maka ya? Ma ị̀ na-ekpe ma ị́ naghị ekpe, i nwere ike ịna-eche, sị: ‘Ikpe ekpere ọ̀ badịrị uru? È nwere onye na-ege ntị n’ekpere anyị?’ Otu nwoke na-ede akwụkwọ chere na naanị ihe ekpere na-emere onye nwere nsogbu bụ ime ka nsogbu ya pụtụ ya n’obi. Ụfọdụ ndị na-ahụ maka ọgwụ na ahụ́ ike ekwuokwala ụdị ihe ahụ. Ha sịrị na ekpere bụ “ọgwụ n’ụdị nke ya.” Ọ̀ pụtara na ndị mmadụ na-ekpe ekpere naanị iji mezuo iwu ma ọ bụ iji nwetatụ onwe ha?
Ihe Baịbụl kwuru gosiri na ekpere abụghị naanị ihe mmadụ na-eme iji nwetatụ onwe ya. O kwuru na e nwere onye na-ege ntị n’ekpere anyị ma ọ bụrụ na anyị na-arịọ ihe kwesịrị ekwesị nakwa otú kwesịrị ekwesị. Ọ̀ bụ eziokwu? Ka anyị lee ihe ụfọdụ mere mmadụ kwesịrị iji kwere na e nwere onye na-ege ntị n’ekpere anyị.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Ekpe Ekpere?